उनीहरु, जो मसँगै हिँडे - १
~राजकुमार दिक्पाल ~
मेरा अक्षर चिहाउने आँखा
एउटा ठाउँमा बसेर लेखिरहेको थिएँ, फुल्स्केप कागजमा । मेरो बानी छ, सबैभन्दा पहिले विषयवस्तु लेखिसक्ने, अनि विषयवस्तुको शीर्षक लेख्ने, त्यसपछि लेखक अर्थात् आफ्नो नाम । मैले आफ्नो बानीअनुसार त्यसै गरेँ, अर्थात् अन्तिममा आफ्नो नाम लेखेँ ।
“तपाईं यो नामको मान्छे हो ?” अघिदेखि मैले लेखेको चिहाइरहेका एक किशोरले बडो आश्चार्यमा परेर मलाई सोधे ।
“हो, मै हुँ त यो मान्छे ।”
उनले धेरैपटक यो नाम पढेको बताए । फेरि अर्को समय त्यो किशोर त्यहीँ ठाउँमा भेटिए । उनको साथमा थियो, केही पत्रपत्रिका । उनकोनाममा केही पाठक प्रतिक्रिया र रोचक जानकारी छापिएका रहेछन् । देखाएर भने,“यहाँनेर मेरो नाम छापिएको छ नि ।”
त्यो किशोरले मेरो पिछा गर्यो अब । मकहाँ आउने, र अनेक जिज्ञासा राख्ने । घरिघरि त दिक्क पनि लाग्थ्यो, मलाई ।
म त्यो बेला चतरालाइनमा महेश श्रेष्ठको छिमेकी भएर बसेको थिएँ । महेश श्रीमतिसहित बार्दलीमा थिए, त्यो साँझको । “ऊ फेरि आयो”, महेशजीको श्रीमतिको आवाज आयो । उही थोत्रो साइकल खिरिङ् खिर्ङि पार्दै त्यो किशोर मकहाँ आउँदै गरेको सूचना महेश दम्पतिबाट प्राप्त हुनासाथ “म यहाँ आज छैन भनिदिनु है” भनेर म लुकेँ । त्यो रात मलाई धेरै लेख्नु थियो । मलाई नभेट्ने सूचना पाएपछि उनी फनक्क फर्केको सूचना पाएपछि म दुलोबाट निस्केँ ।
उनको पत्रकारिताको तिब्र तिर्खा बुझेपछि पहिलोपटक म आफैले सङ्कलन गरेको दुई वटा समाचार उनको नाममा लेखेर भनेँ,“लु यो तिम्रो अक्षरले सार त भाई ।” उनले त्यसै गरे ।
पछि ती किशोर आफ्नो नातेदारको घर छाडेर मेरै डेरामा बस्न थाले । एउटै भाँडामा पकाएको खाएर एउटै कोठामा हामीले दुई वर्षजति बितायौँ ।
हामीले एउटा साप्ताहिक अखबार चलाएका थियौँ, धरानबाट । एकदिन समाचार लेखिसकेपछि समाचारकक्षबाट ती किशोर ओझेलिए । कता गएछ भनी खोज्दै गएको त, फिर्ता आएर स्टोरमा थन्किएका अखबारको थाकमाथि ढलिरहेका उनी त । उनको निधारमा भिजेको रुमालको पट्टि थियो । हनहनी ज्वरो आएको रहेछ । तर हामीसँग सिटामोल किन्ने पैसासमेत थिएन, कठै । असाध्यै मेहनती ती किशोर अहिले त परिपक्व युवा पत्रकार बनिसकेका छन् ।
उनी हुन्, डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ ।
मेरो छेउमा एउटा साइकल
भानुचोकमा एउटा कार्यक्रम भइरहेको थियो, म रिपोर्टिङको क्रममा थिएँ । अर्कोतिर पुलुक्क आँखा पुग्यो मेरो । एउटा साइकल म भएतिर आएर मेरै छेउमा रोकियो । साइकलबाट उत्रेर ती किशोरले जम्ला हात गरेर भने,“नमस्कार दाई ।”
नचिनेको र यसअघि नभेटेको व्यक्तिबाट आज अचानक नमस्कार पाएँ मैले । आश्चार्यमा परेँ । आफूलाई त्यत्रो आदरभावले नमस्कार गर्नेलाई नचिनेजस्तो पनि किन गर्नु ? मैले पूर्वपरिचितजस्तै भाव प्रकट गरेँ । ती किशोर धेरै नबोली बाटो लागे । जाने बेलामा फेरि जम्ला हात गरेर भने,“दाई भेट्द्र गरौंला है ।”
को होलान् ती किशोर ? केही दिन मनमा कुरा खेलिरह्यो ख। अनि आँखाभरि नाचिरह्यो, बुट्टे सर्ट लगाएका ती किशोरको अनुहार ।
पछि ती किशोर मेरो सम्पर्कमा आए । मैले काठमाडौंबाट निस्कने एउटा अखबारमा उनलाई सिफारिस गरिदिएँ । त्यो बेलासम्म उनमा पत्रकारिताको साह«ै ठूलो भोक पो जगाइसकेको रहेतु मैले ।
एकदिन मैले उनलाई भनेँ,“तिमी रेडियोतिर जाऊ हौ भाई ।” पूर्वी नेपालमा एफएम विस्तारको सुरुआत भइरहेको बेला ती भाईले ठाउँ ओगटिहालेछन् । मैले काठमाडौंमा रहेर ती भाईको प्रगतिका सन्देशहरु सुन्न पाइरहेँ ।
पत्रकारिता र त्यसमा पनि श्रब्यदृश्य पत्रकारितालाई सफलतापूर्वक आफ्नो साधनाको माध्यम बनाइरहेका ती भाइ हुन्, देवराज राई ।
भेट गर्ने आतुरता
दिवंगत कवि विमल गुरुङको घरमा बास थियो मेरो । विमलका माता सरस्वति र पिता पूर्णबहादुर गुरुङले मेरो गाँस र बासको ब्यवस्था गर्नुभएको थियो । त्यो बेला विमलको नाममा स्थापित पुस्तकालयलाई तन र मनले सघाइरहेको थिएँ ।
“स्थानीयस्तरले मात्रै हुँदैन, राष्ट्रिय स्तरकै कविता महोत्सव गरौँ” भन्ने मेरो प्रस्ताव गुरुङ दम्पतिबाट सहर्ष स्वीकृत भयो । २०५२ सालदेखि राष्ट्रियस्तरको कविता महोत्सव सुरु भयो ।
“दाई उसले पनि कविता बुझाएको छ”, डम्बरकृष्ण र देवराजले एक जना युवालाई मेरो अगाडी उभ्याए । कविता छनौटका क्रममा निर्णायकहरुले उनको कवितालाई उत्कृष्ट कवितामा राखेका थिए । त्यो साल गोरखाका भीम राना “जिज्ञासु”प्रथम, कास्कीका रमेश श्रेष्ठ द्वित्तीय र सुनसरीका पेशल आचार्य तृतीय भएका थिए ।
पछि ती कवि भाई आएर भने,“दाई मलाई पनि पत्रकारिता गर्ने मन छ, कसो गर्ने होला ?”
मैले उनलाई राजधानीबाट निस्कने एउटा साप्ताहिकका लागि सिफारिस गरेँ । बाइलाइनका समाचार बोकेर ती भाई आउँथे र बडो गौरवका साथ भन्थे,“दाई, आज पनि छापियो नि !”
उनको गौरवानुभूतिले मलाई पनि स्पर्श गरथ्यो
पछि मैले उनलाई एउटा राष्ट्रिय दैनिकका लागि पनि सिफारिस गरिदिएँ । लामो समय त्यो दैनिक(हालःबन्द)मा काम गरे उनले । अहिले पनि उनी एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा सशक्त श्रमजिवी सञ्चारकर्मीको रुपमा सक्रिय छन् ।
उनी हुन्, प्रदीप मेयाङ्वो ।
मसँगै हिड्न चाहने यी भाईहरुले आफ्नो पेशागत इमान्दारितामाथि कसैलाई पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएनन् । मैले उनीहरुलाई सशर्त यो क्षेत्रमा ल्याएको हुँ । मेरो सर्त थियो,“पत्रकारिता गर्नू, तर पत्रकारिताको नाममा दायाँ बायाँ नगर्नू ।”
बरु हामीले पत्रकारिताका खातिर एउटा सारङ्गी जीवन बितायौँ । पेट खोक्रो भए पनि मीठो धुन निकाल्ने हाम्रो प्रयत्न जारी थियो ।
एक दिन इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी निरिक्षकले एउटा भेटमा मलाई भने,“तपाईंहरु त हाम्रो अफिसमा पनि आउनुहुन्न, किन ?”
“म त आउन भ्याएको छैन सर, तर भाईहरुलाई त पठाइरहेकै छु त ।”
म उनै भाईहरुलाई पठाउँथेँ, हाम्रो पत्रिकाका लागि समाचार लिन, इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा । उनीहरु समाचार मात्र लिएर आउँथे, त्यहाँबाट । मैले उनीहरुलाई भनेको थिएँ,“प्रहरी कार्यालयबाट समाचार मात्र ल्याउनू ।”
तत्कालिन प्रहरीनिरिक्षकको भनाईबाट मैले बुझेको आशय थियो, “बन्द खाम” बुझ्न मेरो टिम त्यहाँ जाँदै जाँदैन । अर्थात् मेरा भाईहरु जो मसँगै हिँडे, उनीहरुले मात्र पत्रकारिता गरे, तर पत्रकारिताका नाममा दायाँबायाँ गरेनन् ।
हो, हामीले पत्रकारिताको नाममा दायाँबायाँ गरेनौँ । बरु पसिना बगाउन यो पृथ्वीको विभिन्न भूगोलमा बाँडिएका छौँ, यतिखेर हामी । डम्बरकृष्ण र देवराज हङकङमा, जसकुमार अमेरिकामा र म युरोपमा छु । हामी पलायन भएका होइनौ । हामी विस्तारित भएका हौँ । पलायन भएको भए, कीबोर्डमा अक्षरहरुको गन्ती गर्दै नाचिरहेका यी औंला उहिल्यै भाँचिइसकेको हुने थियो । कि कसो ?
यी भाईहरु, जो मसँगै हिँडे । यात्रामा सँगै हिँडे पनि कोही अगाडी हुन्छ कोही पछाडी । यी भाईहरु चुचुरोमा पुगेको देख्न चाहन्छु म । यी भाईहरुले चुचुरो चुमिरहेको बेला, म भञ्ज्याङमै रहेरै खुसीले ताली पिटिरहेको हुनेछु । हाँसिरहेको हुनेछु, उसरी नै नाचिरहेको हुनेछु ।